UJohn Malkovich njengoPoirot. Kwaye nobunye ubuso bomcuphi ka-Agatha Christie | Uncwadi lwangoku
UJohn Malkovich, uTony Randall, u-Ian Holm, uAlfred Molina, uAlbert Finney, uPeter Ustinov, uDavid Suchet, noKenneth Branagh.
Yintoni ihlobo ngaphandle kwencwadi kaAgatha Christie? Okanye imuvi? Okanye uthotho? Akukho nto. Indalo iphela ukumkanikazi ongummangaliso wemfihlakalo kunjalo, kwaye iya kuqhubeka ikuku, ibe nkulu kangangokuba unyaka nonyaka kukho into entsha. Ukuphinda kuphume iinoveli zakhe, ulungelelwaniso olutsha lwefilimu, olunye uhlaziyo kumabonwakude ...
Kunyaka ophelileyo ingxelo yeshumi elinanye Ukubulala kwi-Express Express noKenneth Branagh njengomcuphi waseBelgium ongafiyo uHercule Poirot. Ewe, owokugqibela ukujoyina indalo yonke kwaye unike ubomi I-Poirot es UJohn Malkovich entsha Iinkonzo zeBBC. Ndiyayijonga kwakhona ubuso obuninzi ngubani obenolu hlobo oluqhelekileyo nolunobuqili.
2 Iinkonzo ezintsha zikaPoirot
3 Ubuso bukaPoirot
3.1 UTony randall
3.2 UIan Holm
3.3 UAlfred Molina
3.4 UAlbert Finney
3.5 UPeter Ustinov
3.6 UDavid ulandela
3.7 UKenneth brannagh
Ukuthi, ukubhala okanye ukubhekisa kwi-BBC ekwenziweni kothotho lukamabonakude ngu ntonye nomgangatho kunye nokugqithisa kwizinga eliphezulu. Kufuneka uvume. AmaBritane koku zezona zibalaseleyo. Kwaye ukuba bathathe ilifa labo elikhulu lezembali kunye nelokubhala, bahlala besenza imimangaliso kuzo zonke iinkalo, ukusuka ekuqondeni, ukufota, ukunxiba, ukuseta nokutolika.
Yinto eyaziwayo ukuba Abadlali beBritane Zithathwa njengezona zibalaseleyo kwihlabathi. Kodwa amaxesha ngamaxesha i-BBC iyabeka izandla izinto zangaphandle nabantu. Kwaye aba ngabo bagqibela ngokufumana ithoni British ezibangqongileyo.
Iinkonzo ezintsha zikaPoirot
Ku malunga ne uhlengahlengiso lwe Abahluleli baka-ABC, inoveli epapashwe kwi 1936 eguqulelwe apha njenge EImfihlelo yesikhokelo sikaloliwe. Icinga ukubuyela kumabonakude kaHercule Poirot ngoku ozelwe nguMntla Merika UJohn Malkovich.
Ngaba uya kuba Iziqendu ezithathu esele iqale ukufota. Ukufakwa kwesamente kugqityiwe Umbala ophindiweyo (Ron Wesley ongunaphakade evela kwiimuvi zikaHarry Potter), njengoMhloli woLwaphulo-mthetho. UAndrew Buchan (ukusuka kuthotho lweBritane oluyimfihlo Isasazo), UEamon Farren (Twin ezilele) okanye UTara Fitzgerald (Umdlalo wetrone).
Wahlala e iminyaka engama-30, isixelela ngendlela iPoirot efumana ngayo cubugcisa bombulali osayina njenge-ABC kwaye oko kukucel 'umngeni ekubambeni. Umxelela ukuba uceba ukwenza uthotho lolwaphulo-mthetho ngokulandela oonobumba. Eyokuqala iya kuba yeyomfazi omdala obizwa ngokuba ngu UAlice wascher loo mntu une-tobacconist. Ngaphambi kokuba umcuphi aphendule, kuvela elinye ixhoba UBetty barnard. Ke iPoirot kuya kufuneka ifumane imikhondo yokuthintela ulwaphulo-mthetho oluninzi.
Oko kuye kwabaninzi ukusukela kumdala kwiimuvi ukusuka kwi-30s kude kube ngoku. Eyona nto iboniswa kumabonwakude ngokungathandabuzekiyo nguDavid Suchet, kodwa uluhlu lubandakanya la magama afanelekileyo.
Merika, ubuso bukaTony Randall yile umhlobo ongunaphakade, enelizwi elinesazela okanye into ehlekisayo, yabalinganiswa be Iliwa Hudson kwii-comies ezingamashumi amathandathu awayedlala kuzo ecaleni Usuku lukaDoris (Iipijama ezimbini, Ukuthembela ezinzulwini zobusuku, njl).
URandall ubhalelwe ngokuchanekileyo njengePoirot kolu hlengahlengiso lutsha lwenziwe ngoku Imfihlelo yesikhokelo sikaloliwe. Kwakusefilimu yaseBrithani Ulwaphulo-mthetho lwealfabhethi ngubani owalathisayo UFrank tashlin en 1965. Iskripthi sakhe sahluke kakhulu kwinoveli kwaye sinomdla wokuhlekisa ngakumbi.
Lo mdlali ubalaseleyo weNgesi ubonwe kwi OMnye, Iimoto zomlilo o INkosi yamakhonkco, wadlala iPoirot kwi ibhayisikobho Kumabonwakude ekhokelwa nguLawrence Gordon Clark kwi 1987. Kwakukho Ukubulala ngencwadi.
Kwakhona isiNgesi kwaye kubonwe ngobuninzi bee-movie ezidumileyo njenge Abahlaseli bomkhombe olahlekileyo, Chocolat o Ikhowudi yeDa Vinci, UMolina wadlala iPoirot kwi 2001. Kwakukho kolunye uhlengahlengiso lwangoku lwe- Umabonakude we Ukubulala kwi-Express Express.
Enye indawo entle yaseBritane, ebonwe kuyo Tom Jones, Ababini endleleni, Abaxhasi, Unyaka olungileyo o Sibakabhaka Yiwa. I-Poirot yakhe Ukubulala kwi-Express Express ukuba ngaphakathi 1974 Wayalathisa USidney Lumet kuba umboniso bhanya yenye yezona zibonakalayo. Kodwa wenqabile ukuyiphinda kulungelelwaniso olulandelayo olucetywayo kuye kwaye wayigqithisela kugxa wakhe kunye nomdlali obalaseleyo ...
… Ngubani odlale iPoirot amatyeli amathandathu. Zimbini ze-cinema kwi Ukufa kumNayile (1978) kunye Ukufa phantsi kwelanga (1982). Ezinye iifilimu ezintathu zeTV ezazikho Ukusweleka kweNkosi Edgware (1985) Indlu yeNasse House (1986) kunye Intlungu kwizenzo ezintathu (1986). Kwaye wayithatha kwakhona kwi cinema kwi Rendezvous ngokufa (1988). Ibiyi ubuncinci ngokomzimba kubalinganiswa bokuqala boncwadi, kodwa wayeyazi indlela yokuyinika eyona nto ayithandayo.
Umabonakude iPoirot edume kakhulu ngokungathandabuzekiyo. Wayidlala yonke Izahluko ezi-70 kuthotho I-Agatha Christie's Poirot, ukusuka kwityathanga laseBritane ITV (ngoku inokubonwa kwi Inethiwekhi enkulu), ukusukela ngo-1989 ukuya ku-2013.
Okokugqibela kwaye mhlawumbi kungaphumelelanga kubo bonke, oko yenzekile ngaphandle kwentlungu okanye uzuko ngumboniso bhanya-bhanya kancinci ngaphantsi konyaka odlulileyo. Mhlawumbi olo hlobo lweshumi elinanye Ukubulala kwi-Express Express, ngokuba lolona luxhaphakileyo. Kwaye i-cast ye-hackney enkulu ehamba kunye nayo ayisebenzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » UJohn Malkovich njengoPoirot. Kwaye nobunye ubuso obuvela kuMcuphi uAgatha Christie.